Sawirro-Danjire Micheal Keating oo ka qaxwaynaya meheradaha Garoowe. – Radio Daljir
Sawirro-Danjire Micheal Keating oo ka qaxwaynaya meheradaha Garoowe.
Noofember 8, 2016 7:35 b 0
Garoowe, Nov 08 2016–Wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Micheal Keating oo booqasho kuyimi magaalada Garoowe ayaa kudhex lugeeyey barxadda weyn ee magaalada Garoowe, isagoona lacabey shaah qaar kamid ah shacabkii kusugnaa xarumaha laga qaxweeyo.
Micheal Keating oo ay si xog warsadeen shacabkii joogey goobtaasi ayaa sheegay in ammaanka kajira magaalada Garoowe dartiis uu go’aan saday inuu magaalada baararkeeda dadka shacabka ah isagoo uu weheliyey wasiirka caafimaadka dowladda Puntland Cabdinaasir Cismaan Cuuke.
DHEGEYSO-Faalo Xasaasi ah oo ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Magaalada Baydhabo oo maanta lagu doortay 7 kamid ah xildhibaanada aqalka hoose.